किन सुन्निन्छ अण्डकोष? यस्ता छन् ७ कारण – Etajakhabar
किन सुन्निन्छ अण्डकोष? यस्ता छन् ७ कारण
कुनै किसिमको संक्रमण भए पनि अण्डकोष सुन्निने गर्छ। अण्डकोषको संक्रमणलाई ‘अर्थाइटिस’ भनिन्छ। यस्तो संक्रमणमा हुँदा इन्फेक्सन भाइरल, ब्याक्टेरियल वा क्षयरोग (टिबी) भएको हुन सक्छ। धेरैलाई यी र यस्तै संक्रमणका कारण अण्डकोष सुन्निने गरेको पाइन्छ। भाइरलमा सबैलाई हुने भनेको ‘हाँडे’ आउनु हो। हाँडे आउँदा अधिकांशलाई अण्डकोष सुन्निने समस्या देखिन सक्छ। ब्याक्टेरियलमा पिसाबको संक्रमण गराउने किटाणूहरुले पिसाबनलीबाट सरेर अण्डकोषको संक्रमण गराउँछन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २६, २०७४ समय: ८:५४:३२